Ndinofanira Kutsiva Yangu Hita Mvura Isati Yakundikana? - Zvinyorwa
iphone 6 yakangovhara
ipad yakadonha uye wont batidza
iphone 6 dambudziko bhatani repamba
Ndini pandingatsiva bhaira rangu?
Nekushandisa iyo boiler, ichave inoda kuve yakatsiviwa mushure mokunge Makore gumi nemaviri kusvika gumi nemashanu nekuda kwekupfeka uye kubvaruka, kunyangwe iri bhaira rakachengetedzwa zvakanaka. Bhaira izvo Makore gumi nemashanu ekuberekwa kana kupfuura ane njodzi zhinji . Imwe yenjodzi ndeyekuti pazuva rinotonhora remwaka wechando, bhaira rinogona kuputsa uye risingatarisirwi kukusiya uchitonhora.
Mabhaira anotsiviwa nekuti hupenyu hwavo hwehupfumi hwakatosvika, uye hwasakara. Zvikamu zveboiler, senge bhaira uye zvinopisa, zvinogona kuputsa nekufamba kwenguva. Nekuda kwezera rebhaira, hazvina musoro kutsiva zvikamu. Zvikamu zvisina kukwana zvinowanzoitika mumabhaira ekare.
High simba mari
Chimwe chikonzero nei mabhaira akura achida kutsiva ndeyekuti vanoda simba rakawanda kuti vachengetedze tembiricha mumba padanho raunoda. Matsva matsva anowedzera mari uye yakakosha kudyara. Iwe unochengetedza zvirinani makumi maviri neshanu muzana emagetsi emagetsi neaboiler nyowani .
Mabhaira anogara asingashandi kana asingakwanise kupisa imba zvakaringana anodawo kuchinjwa. Sezvo mabhaira anokura, iwe uchatarisana nemisanganiswa iyi. Ramba uchifunga kuti mabhaira ekare, mushure mekuve akarongeka kwechinguva, anozotadza kana vachifanira kushanda zvekare. Tenga bhaira nyowani nguva inotonhora yechando isati yatanga kuitira kuti imba yako iitwe nechando, uye haufanire kugara muchitonhora.
Kana iwe uchida kuwana zvakanyanya kubva kubhaira, bhaira rinofanirwa kushandirwa makore maviri ega ega. Izvi zvinowedzera hurefu hwehupenyu hwemabhaira. Bhaira risingazivikanwe rinotadza kukurumidza. Zvisinei, haufaniri kumirira kusvikira makore maviri apfuura. Panguva ino, iwe unogona zvakare kutora matanho iwe pachako kuti uchengetedze bhaira uye uone kuti inoshanda nemazvo.
Heano mazano mashoma ekugadzirisa kwenguva.
Bvisa tambo yemagetsi kubva pasokisi remadziro
Ipapo iwe unobvisa jasi kubva kubhaira
Chenesa zvikamu zvakavezwa zvine bhurasho newaya
Bvisa uye suka siphon.
Dzorerazve zvakasunungurwa zvikamu
Chinhu chekupedzisira kuita kutarisa kana icho chinhu chese chisingabude.
Mutengo wekutsiva boiler
Bhaira nyowani inodhura mari, uye iwe unotarisira kuti igare kwenguva yakareba. Sezvakakurukurwa pakutanga, chengetedzo chaiyo yebhaira yako inogona kuona kuti ichagara makore gumi nemashanu. Mushure memakore gumi nemashanu ichazoda kutsiviwa zvakadaro. Mabhaira anogona kutengwa pamwe kana pasina kuisirwa, asi kazhinji, vatengi vanoda kuve nekugadzwa kunoitwa nenyanzvi kune imwe mari shoma.
Izvi zvinokupa vimbiso yekuti bhaira rakanamirwa nemazvo. Mabhaira ane kuiswa anosiyana pakati pe $ 1000 ne $ 2000. Ehe, pane mamwe marudzi emabhaira ane rimwe simba. Aya marudzi anodhura zvakanyanya, asi iwe unogona kuwana kugona kwakanyanya nesimba rekuwedzera.
Kutsiva bhaira chinhu chinodiwa kana hupenyu hwayo hwatopfuura. Nekuti kutsiva bhaira kuita kwakakosha kudyara, zvine hungwaru kuve wakanyatsogadzirira mune zvemari izvi. Iwe zvakare unofanirwa kubata nezvakawanda zvakavuza mumba? Rega mupombi anotarisa uye agadzirise dambudziko.
Iva nenguva paunenge uchitsiva bhaira
Bhaira rakatyoka rinogona kudonha uye kukonzera kukuvara kwemvura . Kudzivirira kuri nani pane kurapa. Iyo yakakura iyo bhaira iri, iyo inowedzera njodzi yekuti bhaira rako richaputsika. Naizvozvo, iva nenguva.
Wanga uine bhaira rakafanana kwenguva? Ipapo zvakanaka kuti utarise kushandiswa kweboiler. Vagadziri havamire vakamira uye vari kuvhura zvimwe mabhaira anoshanda kuwedzera pamusika. Izvi zvinogona kureva kuti iwe une bhaira rinokusungira nemutengo wakakwira wesimba. Ipapo zvingave zvine hungwaru kutsiva bhaira neyakagwinya-simba. Kugadzirwa kwechigadzirwa hakumire, uye tekinoroji iri mumabhaira (ese simba uye kuputira) inoramba ichiita zvirinani.
Iyo mari iwe yaunobva waita kutsiva yekare bhaira neyakanyanya inoshanda inowanzo kutorwa kumashure 1 kana maviri apfuura.
Tora kudzoka kwakanyanya pane bhaira rako
Iyo yepakati yekupisa bhaira inopa imwe huwandu hwemvura inopisa paminiti uye inogona kuichengeta mune bhaira. Kana huwandu hwemvura inopisa iri iyo chaiko huremu hwaunoda, iwe, saka, unozowana mukana wakakwana kudzoka kubva kubhaira rako.
Mune imwe nguva yemakore gumi nemashanu, yakawanda inogona, chokwadika, kuchinja mune imwe mamiriro ekugara.
Zvinogona kunge kuti vanhu vashoma vakatanga kugara mumba mako, zvinoreva kuti kugona kweaboiler iyo yakatengwa ipapo iko zvino kwanyanya kwazvo.
Iwe unogona kukurumidza kushandura izvi nekuita iyo yekumisazve gadziridza bhaira rako, uye izvi zvichange zvichitokupa iwe zvakanyanya kuchengetedza gore rega.
Zano: chinja bhaira muzhizha
Iwe haufanire kumbobata thermostat yako muzhizha, sezvo zuva riri, chokwadika, iyo yakachipa kwazvo kupisa system iripo.
Saka panguva iyoyo, iwe hauna kana kunetseka nezve yako yekare boiler. Asi ikozvino mwaka wechando wave kukona, uye zvichawedzera kutonhora kunze, kudziya kuchazoshanda nesimba zvekare.
Panguva ino matambudziko anowanzouya nepakati kudziisa mabhaira! Saka ita shuwa kuti iwe uri panguva yekugadzirisa pane bhaira rako.
Kana iwe uchizotsiva bhaira, ita izvi muzhizha uye uve nechokwadi chekuti unogona kushandisa kupisa muchando.
Kugadziriswa uye kutsiva kwezvinhu
Periodic bhaira kugadzirisa inokurudzirwa . Iyo inoderedza njodzi yekukanganisa uye kupfeka kusiri madikanwa nekuda kwenzira dzisina kururama.
Nenzira iyi, bhaira rako rinogara kwenguva yakareba uye rinogara riine mari yakawanda mukushandisa gasi. Chimwe chinhu chakakosha pakuchengeta bhaira kwakakodzera kuburitsa. Verenga zvimwe nezve izvi papeji kuburitsa kupisa.
Tichanyora muchidimbu izvo zvakakosha zvakanyanya zvekuchengetedza zvikamu zveapakati yekupisa bhaira izvo zvinowanzoda kutsiva:
Izvi zvinodziya zvikamu zvinowanikwa zvakasiyana uye zvakachipa uye zvinogona kukurumidza kutsiviwa neanomisikidza.